बडिगाड खोलमा बन्दै गरेको पक्की पुल भत्कियो, ५ जना घाइते | Radio Republic 88.2 MHz
आज नागपञ्चमी:घरका ढोकामा नागको चित्र टाँसी पूजाआजा गरी मनाइदै ,
गायिका सुनितामी परियारको मौलिक तिज गित बाबरी लाईछौ बजारमा ।।
Home समाचार बडिगाड खोलमा बन्दै गरेको पक्की पुल भत्कियो, ५ जना घाइते
बडिगाड खोलमा बन्दै गरेको पक्की पुल भत्कियो, ५ जना घाइते
on: April 15, 2019 In: समाचार, स्थानियNo Comments
२०७६ बैशाख १ ,
बडिगाड । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ३ को झेंदी भन्ने स्थानमा निर्माणाधिन बडिगाड खोलाको पक्कि पुल भाँचिदा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको इमरजेन्सी पोलिक्लिनिक हटियामा उपचार भैरहेको छ ।
घाइतेहरु मध्ये निर्माण व्यावसायी समेत रहेका ऋषिराम इटनी काठमाडौं र बडिगाड गाउँपालिका २ का तुल वहादुर रानालाई पोखरा रिफर गर्ने तयारी भएको अस्पताल श्रोतले जानकारी दिएको छ। सो दुर्घटनामा गुल्मी मुसिकोट नगरपालिकाका रन वहादुर कुमाल, गणेश कुमाल र रुद्र वहादुर कार्कि घाइते भएको अस्पताल श्रोतलाई उदृत गर्दै हटियावाट दिपेश विसीले जानकारी दिनुभएको छ।
शुक्रवारवाट ढलान सुरु गरि अन्तिम अवस्थामा पुगेको वेला पुल एक्कासी विचवाट भाँचिएको हो। ५५ मिटर लामो सो पक्कि पुल संघिय सरकार सरकार अन्तरगत ५ करोड लागतमा निर्माणाधिन रहेको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ ।
वडा अध्यक्ष काफ्लेले इन्जिनियरिङ त्रुटिकै कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। जयवुद्ध कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले पुलको निर्माण कार्य गरिरहेको थियो ।
गत वर्ष सोहि स्थानमा रहेको झोलुंगे पुल भत्किएपछि सो पक्की पुलको निर्माण भैरहेको थियो। यहि जेठ महिनावाट तर्न मिल्ने गरी तिव्र गतिमा काम भैरहेको पुल भत्किएपछि स्थानियहरु अन्योलमा परेका छन्।
नयाँ वर्षमा वन बाटीकामा २० हजारले अवलोकन गरे, बृहत्त सास्कृतिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न
लन टनिसमा एपीएफलाई थप दुई स्वर्ण